TOY FOX TERRIER DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Toy Fox Terrier Dog Macluumaadka iyo Sawirada
UKC CH Tuffy, waxaa iska leh sawirka Rocktalk Toyfox Terriers
Liiska Toy Fox Terrier Mix Eeyaha Taranka
Teri Ciyaaraha Mareykanka
toy fahks TAIR-ee daawasho
Toy Fox Terrier sidoo kale waxaa loo yaqaan American Toy Terrier ama Amertoy. Sanka waa madow marka laga reebo eeyaha shukulaatada halkaasoo uu isku midabeyn doono. Indhuhu waa madow yihiin waana wareegsan yihiin. Dhegaha ayaa qaabeeya V oo dhisan. Joogsi la hubo ayaa kala soocaya dhakada dhakada iyo muuska cidhiidhiga ah. Timaha ayaa gaaban oo qaro weyn. Dabada ayaa gaaban oo gaagaaban. Fiiro gaar ah: Diraacyada dabogu waa sharci darro inta badan Yurub. Koodhku waa midab saddex-geesood leh, badiyaa waa caddaan leh calaamado madow iyo tan ama tan. Midabyo kale ayaa dhaca, laakiin waxaa laga yaabaa in aan laga aqbalin jaangooyada qoran.
The Toy Fox Terrier wuxuu ahaan karaa mid jidh ahaan yar, laakiin tani waa adag, terrier yar oo haysa dhammaan xiisaha ay leedahay Fox Terrier awoowayaasha. Noocani waa mid adag oo dhalaalaya, waana madax adkaan karaa iyada oo aan hogaan sax ah laga helin milkiilayaashiisa. Cajiib iyo firfircoon, Toy Fox Terrier wuxuu ilaaliyaa ruuxiisa da'da yar noloshiisa oo dhan. Waa caqli, jacayl, xasaasi ah oo wacan. Waa mid feejigan, weydiin iyo deg deg badan. Kani waa eey wehel ah oo aan ilaawin dareenkiisa dabiiciga ah ee hore, sidaa darteedna la dagaallami doona jiirka iyo xayawaanka yaryar. Eygan yar ee ciyaaraha fudud jecel yahay ugaarsiga. Kalgacal badan oo aad u daacad ah, noocani waa eey aan caqli badnayn, eey tababaran. Qaar baa loo tababaray inay ka caawiyaan dadka naafada ah guriga dhexdiisa. Waxay cadeysay inay tahay eey maqalka ufiican dhagaha. Waa loo tababbari karaa inay weheliso rafiiqa aadamiga ilaha ilaha codka, sida taleefanka. Hubso inaad tahay eeygan mid adag, kalsooni leh, oo iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga fogaado Cudurka Dog yar , bini-aadamku kiciyay dhibaatooyinka dhaqanka . Had iyo jeer xusuusnow, eeyadu waa harooyin, ee maaha dad . U hubso inaad la kulanto dareenkooda dabiiciga ah sida xayawaanka. Haduu bani'aadamku sii ahaado 100% hogaamiyaha baakadka, eeyaha ma noqonayaan kuwa wax dhoofiya Carruurta waa in la baraa inay eeyaha ula dhaqmaan si naxariis leh, hase yeeshee sidaas oo kale eygu wuxuu u arkaa ilmaha inuu yahay hoggaamiye. Eygan faraxsan ayaa hubaal ah inuu u keenayo dhoolla-caddayn wejiyada ku dhowaad dhammaan kuwa la kulma, sababtoo ah xamaasad, dariiqooyin u eg eeyo.
Dhererka: qiyaastii 10 inji (25 cm)
Miisaanka: 3.5 - 7 rodol (1.5 - 3 kg)
Tani waa nooc caafimaad oo caadi ah si kastaba ha noqotee, qaar ayaa u nugul Legg-Calvé-Perthes iyo stifle, kuwaas oo ah dhibaatooyinka caadiga ah ee lagu ciyaaro. Eeyaha qaarkood ayaa xasaasiyad ku leh xabo dabocase (kani waa caadi). Sidoo kale, galley iyo sarreen.
Toy Fox Terrier wuxuu ku fiican yahay nolosha guryaha. Waa mid aad u firfircoon gudaha gudihiisana wax caadi ah ayuu sameyn doonaa bilaa daarad la'aan. Uma dulqaadan karo cimilada qabow. Waa inay xirtaa jaakad xilliga qaboobaha si ay uga caawiso inay kululaato.
Kuwani waa eeyo yar yar oo firfircoon oo u baahan a socod maalinle ah . Cayaartu waxay daryeeli doontaa baahiyo badan oo jimicsi ah, hase yeeshe, sida noocyada oo dhan, ma buuxin doonto dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay muujiyaan dhibaatooyinka dhaqanka. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan meel aamin ah oo furan oo ka baxsan leedhka, sida deyr weyn oo ood leh.
Qiyaastii 2-6 eey
Toy Fox Terrier waa fududahay in la hagaajiyo. Mararka qaarkood shanlee oo cadayo jaakadda jilicsan. Ciddiyaha gaabi. Noocani waa iftiin shidan.
Toy Fox Terrier-ka waxaa laga soo saaray gudaha USA 1930-yadii. Waxay si toos ah uga soo degtay Cajiib ah Fox Terrier , kaas oo lagu soo tallaabay noocyo kala duwan oo toy sida th Guntin yar , Talyaani Greyhound , Chihuahua iyo Manchester Terrier , iyada oo ujeedadu tahay in la yareeyo. Isticmaalkeedii ugu horreeyay wuxuu ahaa ugaarsiga jiirka. Toy Fox Terrier wuxuu AKC aqoonsaday 2003.
Toy Fox Terrier Puppy-Sawir waxaa iska leh Foxhill Toy Fox Terriers
Foxlairs Minnie the Moocher, waxaa iska leh sawirka Foxlair Toy Fox Terriers
Lahaanshaha sawirka Foxlore Toy Fox Terriers, waxaa qaaday Sally Richardson
Sadie the Toy Fox Terrier eey 3 bilood jir ah.
Oreo the Toy Fox Terrier oo 4 jir ah— Gabi ahaanba waa cajiib. Jacaylka ay ii qabto waa mid shuruud la’aan ah, aadna loogu baahan yahay. Way ku fiican tahay carruurta, xayawaanka iyo safarka. Calaamadeynteedu waa dhif, sidaa darteed waxaan u maleynayay inay wax weyn ku kordhin doonto sawirrada noocyadan. '
Eeg tusaalooyin badan oo Toy Fox Terrier ah
Toy Fox Terrier Sawirada 1
Toy Fox Terrier Sawirada 2
noocee ah eeyaha waa clifford
8 bilood jir puppy puppy
shiba inu lagu qasay pug
shih SUNTZU isku darka Pit silky